Digby: Ku wadista ganacsiga maxalliga ah barnaamijyada moobilada gacanta | Martech Zone
Digby: Ku wadista Ganacsiga Maxaliga ah barnaamijyada moobilada
Arbacada, Janaayo 2, 2013 Douglas Karr
Waxaan aaminsanahay in qoraalka uu ku yaal darbiga oo goobaha tafaariiqda ay hadda sameynayaan maalgashiyada lagama maarmaanka u ah istaraatiijiyadda moobiilka. Mobaylka ayaa fure u noqday cilmi baarista macaamiisha iyo dhaqanka wax iibsiga. Marka lagu daro korsashada ballaaran ee taleefannada casriga ah, shaki yar ayaa ka jira saamaynta ay moobiil ku yeelan doonto sannadaha soo socda. Digby wuxuu bixiyaa SDK halkaasoo dalabka mobilada ee mobilada si fudud uu isugu dari karo geofencing - ka dhig abkaasi mid ku baraarugsan goobta Digby ku saleysan Analytics iyo awoodaha suuq geynta.
Iyadoo loo marayo Digby Localpoint ™ Mobile Platform, oo ka kooban Falanqaynta, Wacyigelinta, Goobta, iyo Storefront, Digby waxay ka faa'iideysaneysaa tikniyoolajiyadda ku saleysan goobta si loogu oggolaado noocyada inay riixaan farriimo wax ku ool ah, bartilmaameed ku-meel-gaar ah leh oo soo jiita, saameyn ku yeeshaan, iyo lahaanshaha xiriirka macaamiishooda guud ahaan dhammaan kanaalada - dhammaantood iyada oo loo marayo khibradooda moobiilka ee u gaarka ah.
Digby Localpoint ™ Madal Moobil
Gaarsiinta Deegaanka - Macaamiisha ayaa ka fogaan kara heshiisyadaada ugufiican weligoodna ma ogaan doonaan. Maxaad ugu oggolaan kartaa inay ag maraan markaad isla markiiba shaqsiyan gaari karto oo aad u jiidan karto dukaanka adoo si toos ah ula xiriiraya barnaamijkaaga moobiilka? Digby Localpoint Outreach waxay kaa caawineysaa inaad xiriir ka sameyso qol aad u xoog badan oo ka mid ah awooda suuq geynta goobta ku baraarugsan ee loogu talagalay gaar ahaan noocyada.
Goobta Goobta - Macaamiisha awood u siiya taleefannada casriga ahi hadda waxay awoodaan inay hubiyaan qiimaha tartamaya inta ay socdaan socodkaaga. Ku kac gulufka adoo siinaya khibrad mobiil kuu gaar ah oo qiimo leh, hawlgelin iyo kaarka ugu dambeeya ee daacadnimada. Digby Localpoint Venue waxay kuu ogolaaneysaa inaad kaqeybqaadato kaqeyb qaadashada dukaanka dukaanka oo leh qalab aad u xoog badan si aad ugu wargeliso, u caawiso, una dhiirrigeliso macaamiisha ku xiran goorta iyo meesha ugu muhiimsan.
Falanqaynta maxalliga ah In kabadan 90% dakhliga tafaariiqda waxay ka yimaadaan dukaanka laakiin wax aad u yar ayaa hada ku saabsan macaamiisha Analytics dukaanka. Digby Localpoint Analytics waxay kuu ogolaaneysaa inaad ogaato qaabka webka Analytics meelaha jirkaaga iyo xogta qiimaha leh ee ku saabsan sida iyo goorta ay macaamiishaadu booqdaan dukaankaaga, taasoo kuu oggolaaneysa inaad wax badan ka barato iyaga si aad ugu adeegto iyaga.
Khadka Bakhaarka Deegaanka - Macaamiisha ayaa dalbanaya in raadintaada sumadda leh, baarto oo aad iibsato waayo-aragnimada moobiilku ay noqoto mid lagu raaxeysto, ku habboon oo qiimo leh labada dalab iyo waxyaabaha ay ka kooban tahayba. Digby Localpoint Storefront waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto khibrad dukaameysi gaar ah, ganacsi karti u leh kuna dhiirrigeliso oo aad u sheegto macmiilkaaga adoo adeegsanaya astaamahaaga moobiilka kuu gaarka ah iyo websaydhka la isku hagaajiyay.
Tags: androiddigbydigby localpointgeofencingiphonemobilada maxaliga ahmeesha ka warqabaanfalanqaynta moobiilkamobilada sdk